myanmararticle.com – Home Business
by myanmararticle Nov 19, 2021 Health
ကွမ်းစားခြင်းဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်များများက စားသုံးကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ဟိုးရှေးယခင်တွေကတည်းက ကွမ်းစားခြင်းဟာ ရိုးရာဓလေ့ တစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်သည်လာရင် ကွမ်းနဲ့ဧည့်ခံခြင်းဟာလည်း ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဆိုရင်မမှားပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း အာရှအပြင် ဥရောပနဲ့ အနောက်အမေရိကတွေမှာပါ အသင့်စားကွမ်းထုပ်လေးတွေလည်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းဟာ အရက်၊ နီကိုတင်းနဲ့ ကဖင်းတို့ပြီးရင် စတိုတ္ထမြောက် စွဲလန်းမှုအဖြစ်ဆုံးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းဟာ သွားနဲ့သွားဖုံးကို ရောဂါဖြစ်စနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်းမှာ ကြာမြင့်စွာ ငုံထားခြင်းကြောင့်လည်း ခံတွင်းအမြှေးပါးတွေဟာ ပျက်စီရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောက်ကပ်ကိုလည်း…
by myanmararticle Nov 18, 2021 Health
လူတိုင်းဟာ အန်ဆုံးပေါက်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခြင်းကို ခံစားဖူးကြပါတယ်။အံဆုံးဆိုတာ တတိယမြောက် အံသွားကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အသက်၁၈ကနေ၂၅နှစ်အတွင်း ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သောအရွယ်မှာ ပေါက်တဲ့သွားမို့ပညာရှိသွား(wisdom tooth)လို့လဲတင်စားကြပါသေးတယ်။အံဆုံးပေါက်လို့နာကျင်ခြင်းကိုလောလောလတ်လတ်ခံစားနေရသူများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေက ကူညီပေးမှာ ဖြစ်လို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုုကြည့်ပါနော်။ (၁)ပူစီနံရွက် သွားကိုက်သောနေရာသို့ ပူစီနံရွက်အနည်းငယ်ကို ၁၅မိနစ်ခန့်အုံပေးပါ။ သွားကိုက်ခြင်းအပြင် လည်ချောင်းနာခြင်းကိုပါသက်သာစေသောအစွမ်းရှိပါတယ်။ (၂)မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါအနှစ် အံဆုံးပေါက်ခြင်းကြောင့် ရောင်ယမ်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို သင်သုံးနေကျသွားတိုက်ဆေးနဲ့ရောပြီး ပုံမှန်အတိုင်း သွားတိုက်ပါ။အထူးသဖြင့် အံဆုံးနေရာသို့ဖိတိုက်ပေးပါ။နာကျင်ခြင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာစေပါတယ်။ (၃)ရေခဲကပ်ခြင်း ရေခဲက ရောင်ယမ်းခြင်းအားလုံးကိုသက်သာစေကြောင်း ကျွန်တော်တို့သိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ရေခဲကပ်ရာမှာ ၁၅မိနစ်ကြာအောင်ကပ်ပြီး ၁၅မိနစ်ကြာအောင် အနားပေးပါ။ထိုနည်းအတိုင်း အကြိမ်များစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ (၄)လေးညှင်း သွားကိုက်ခြင်းကိုသက်သာဖို့ ရှေးခေတ်ကတည်းကပင် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နာကျင်သောနေရာပေါ်သို့အုံပေးခြင်းဖြင့်…
by myanmararticle Nov 16, 2021 Health
ကြက်သွန်ဖြူ အစိမ်းဟာ ရောဂါအမျိုးမျိုး ကုသဖို့အတွက် ရိုးရာ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ အစိမ်းဟာ ရောဂါအမျိုးမျိုး ကုသဖို့အတွက် ရိုးရာ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ သွေးတိုးတာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကိုလက်စထရော နဲ့ သွေးကြောကျဉ်းတာ ၊ နှလုံးရောဂါတွေကြောင့် သွေးစီးဆင်းမှု လျှော့နည်းတာတွေအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံး အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီညွှတ်ဆုံး အစားအစာဖြစ်တယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူကို စားရင်ဘယ်သူမဆို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို စားသုံးလို့ရသလားဆိုတော့ အခုဖော်ပြမဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ မစားသင့်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူကို လုံးဝစားလို့မရဘူးလားဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် မီးဖုတ်ပြီး စားတာတို့ အစိမ်းလိုက် ဝါးစားတာတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာတော့…
You have to practice hard and work hard if you want to beagreat basketball player. Even if you arearecreational player, wouldn’t it be nice to be an expert at the game? This article will help you become a…
Every basketball player must start somewhere
What information about basketball should I know? To improve your game and understand it better, what skills should you acquire? People tend to focus on the offensive side of the game, but they don't realize that defense during practice is just…
The most important thing to learn in the basketball game is to be always willing to work hard. It is important to avoid practicing things that you're not doing right Follow the tips from experienced teachers. Keep studying for basketball tips…
Basketball is among the most popular sports played in numerous nations. It doesn't matter if it's watching championships, playing asamember ofateam, or just playing around the backyard Basketball will be there. The article below offers excellent strategies that…
by myanmararticle Oct 01, 2021 Football
Everyone from all kinds of backgrounds loves football and has done it for many years. It is true, however, that not everyone has the ability and knowledge required to excel at the game. If you're interested in becomingabetter soccer player…
To beasuccessful football player requiresalot of hard work, teamwork, and practice. However, it all comes together when it's game time. It is hoped that your efforts will are rewarded withawin in the game andalot…
Football isn't onlyasport that is enjoyed by males There are women who are passionate about the game too. Young or old, male or female and old, everybody likes to watch football! If you're puzzled by this and would like to…